माघ ८ को पर्खाइमा नेपाली जनता | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / पाठक पत्र / माघ ८ को पर्खाइमा नेपाली जनता
माघ ८ को पर्खाइमा नेपाली जनता
Posted by: युगबोध in पाठक पत्र January 15, 2015	0 269 Views
एक्काइसौं शताब्दी जहॉ नयॉ परिवर्तनहरु देखिने हाम्रो देशका जनता माघ ८ को पर्खाइमा रहेका छन् । नेताहरु यतिबेला सहमति र अन्तक्र्रियामा लागेका छन् । विशेष गरी माघ ८ को पर्खाइमा बसेका जनताको आशा यतिबेला भरोसामा बदलिन्छ या निराशामा परिणत हुन्छ थाहा छैन । यतिबेला संविधानको पर्खाइमा बसेका जनतालाई माघ ८ ले केही परिवर्तन ल्याइदिन्छ कि ?
युवा सभासद भन्छन् माघ ८ जाडो समयमा कोट छान्दाछान्दा पछि पछुताएजस्तै हो । सायद माघ ८ पनि पर्खदापर्खदा पछुताएजस्तै हुन्छ होला । नेताहरु भन्छन् दुई घण्टामा नै सहमति भयो भने संविधान बन्छ । यहॉ त अझै सिंगै ८–१० दिन बॉकी रहेको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि सयौं व्यक्तिहरुले योगदान दिएका छन् । उनीहरुको त्याग कामलाग्दो बनाउन नेताहरुले आफ्ना पाइला चाल्छन् या यतिकै छोडिदिन्छन् ? माघ ८ ले सहमति र प्रक्रियाले कस्तो परिवर्तन ल्याउ‘छ हेर्न बॉकी छ ।
नेपालमा नेताहरु सहमति शब्दलाई हरेकपटक प्रयोगमा ल्याउ‘छन् । तर व्यावहारिकरुपमा प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । माघ ८ राजनीतिक प्रतिबद्धता हो । जनताको आशा र भरोसा पूरा गर्नको लागि तोकिएको एउटा निश्चित समय हो भन्ने गर्छन् । तर उनीहरु आफै एकआपसमा सहमतिमा आउन सकेका छैनन् । अझै पनि नेताहरुले देशप्रति सहमति र प्रक्रियामा नगइ संविधान निर्माण नगर्ने हो भने बेरोजगारमा रहेका शिक्षित युवाहरुको मष्तिष्क सम्म पनि असर पर्न सक्छ ।
हाम्रो देशमा हरेक वर्ष चार लाख युवाहरु श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् र त्यसमध्ये ३० हजार नेपालमा र अन्य दक्ष युवाहरु बेरोजगारको समस्याले गर्दा विदेश पलायन हुने गर्दछन् । अहिले पनि नेपालमा प्रतिदिन एक हजार नौसय नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश पलायन हुने गर्दछन् । अहिले पनि ३० लाख युवाहरु बेरोजगारका कारण विदेशिएका छन् । यी सबै समस्याहरु आउनु भनेको देशको विकास नहुनु हो । देशको विकास नहुनु भनेको हाम्रा देशका नेताहरु एक आपसमा सहमति र प्रक्रियामा आउन नसक्नु हो । त्यसैले सबै नेपालीहरु यतिबेला माघ ८ को पर्खाइमा रहेका छन् ।
Previous: ऐतिहासिक सन्दर्भ, विकास र लमही नगरपालिका
Next: संसदीय पन्थ, वाम पन्थ र नेपाली जीवनचक्र